नेपाल आज | पिलर हालेदेखि चलाएकै छैन भन्ने चीनले रातारात कसरी नयाँ वनायो ‘१२ नम्वर पिलर’
समाचार अन्तरवार्ता भिडियो देश
बुधबार, ०६ असोज २०७८ गते प्रकाशित - नेपाल आज
कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता तथा हुम्लाबाट कर्णाली प्रदेशसभामा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीले स्थापना कालदेखी नै पिलर नछोएको दावी गर्ने चीनले सिमा क्षेत्रको ‘१२ नम्वर पिलर’ कसरी रातारात नयाँ वनायो भन्दै चीनियाँ राजदुतावासलाई प्रश्न गरेका छन् ।
नेपाल–चीन सिमा विवादका विषयमा स्थलगत रिपोर्टिङ्गका लागि हुम्ला पुगेको नेपाल आजको टिमसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले दुतावासले विवादास्पद प्रतिक्रिया दिएको भन्दै यस्तो प्रश्न गरेका हुन ।
‘नेपाल– चीन सिमास्तम्भ सन १९६२ मा स्थापित भएको । नाम्खा गाउँपालिका–६ मा पर्ने लाप्चामा नेपाली भुमी मिचिएको विषय उठेपछि चीनीयाँ राजदुतावासले हामीले स्थापनाकालदेखी नै पिलर चलाएकै छैन भन्यो’ शाहीको जिज्ञासा छ–‘त्यसो हो भने एउटा मात्रै पिलरको कलर स्वाट्टै राम्रो हुने कसरी हुन्छ ? हिउँदमा के हुन्छ भने पिलरको सिमेण्ट हिउँले खान्छ। तर, हामी निरिक्षणमा जाँदा १२ नम्वरको पिलर नयाँ थियो। र लिपी पनि फरक थिए। अर्कोतर्फ पुरानो पिलर फुटाएका टुक्रा पनि यत्रतत्र छरिएका थिए। अनि दुतावासले हामीले चलाएकै छैनौ भनेर कसरी भन्यो ?’
‘पछिल्लो एक वर्षदेखि सिमागत हलचल भएको छ। हिल्सामा सिमा मिचिएको छैन भन्ने लागेको छ भने मेरो खुल्ला चुनौती छ– मसँग आएर कुरा गरे हुन्छ भनेको हुनाले हामी यहाँ आएका छौं । मलाई पनि हिचकिच भएको छ। उत्तर तिर सिमागत समस्या छैन भन्ने मलाई लागेको थियो । १९६० को दशकमा यो (सिमा छुट्याउने) काम सुरु भएको थियो यहाँ। अन्यत्र सिमांकनको काम नेपाल–अंग्रेज युद्धकै वेला सुरु भएको र अहिले पनि सकिएको छैन। दुईसय वर्ष पुगिसक्यो। सुस्ता, कालापानी र अन्यत्रको समस्या अहिले पनि छँदैछ। ति सवै क्षेत्रको मैले आफैले स्थलगत निरिक्षण गरेको छु । र ति समस्याहरु विकराल छन् र छँदैछन् । कालापानीको कुरा त तपाईले भनिनै हाल्नु भयो। तपाई संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो की हुनुहुन्नथ्यो, तपाईहरुले एउटा फटाई गर्नुभा’रछ। चुचे नक्सा माईनस कालापानी पनि गोद्दिनुभा’रछ। तपाईहरुको विगत त राम्रो छैन। किनभने अहिले आएर तपाईहरुले नै संविधान संसोधन गरेर अनुशुची ३ मा चै चुचे नक्सा माईनस तपाईहरुले चै निशाना छाप वनाउनु भएको रहेछ। त्यो त तपाईहरुको संविधान सभाको साह्रै ठुलो वदमासी हो भनेर मैले वोलेरै आएको छु । तपाईहरको रकेर्ड त त्यति राम्रो छैन, हुँदा हुँदै पनि सिमाको समस्यालाई ब्यवस्थित गर्न सक्दा भोलिको पिढिलाई, यतिकै कारणले अव विकराल रुप पनि निस्किन सक्छ। भियतनामको, रसियाको, चाईनाको, इण्डिया (लद्दाख) को कुरा हेर्यौ भने। पाकिस्तानसँगको कन्ट्रोल लाईनको कुरा हेर्यौ भने पनि यहि कुराले चै धेरै नै गाँजिराखेको छ। त्यो हिसावले यसलाई ब्यवस्थित गर्नु एकदम जरुरी छ। सवै देशवासीले थाहा पाउने गरी कंक्रिटली यसको अवस्था वताई दिनोस। कहाँ के भएको छ र कसरी यस्तो किसिमको स्थिती उत्पन्न भएको हो’ भन्ने नेपाल आजको जिज्ञासको उत्तर दिने क्रममा प्रदेशसभा सदस्य शाही नेपालको सिमाना मिचिएको हो भन्ने दावी गरे।
सिमा मिचिएको विषय र त्यसपछिका घट्ना क्रमलाई उनले यसरी सुनाएका छन् । यहाँ (प्रस्तोता) ले भन्ने गर्नु हुन्थ्यो, म त्यो सुनिरहन्छु–‘यिनले मलाई भेटे भने कहाँनेर पो मार्छन, पुतलीसडकवाट घरजाँदा पनि कहाँ धकेल्ने पो हुन। देश त यस्तै हो, जसले सहि सत्य कुरा निकाल्छ। त्यसका विरुद्ध लागेकै छन। कालापानीको पनि कुरा गरिसकेपछि म आज त्यो झलझन्ति सम्झिन्छु। प्रेमसिंह धामीले कालापानी काठमाण्डौंलाई दुख्दैन भनेर वहाँले रोएर संसदमा भन्दा कसैले सुनेन। आज तेही कालापानी सवैको लागि हटकेक भएको छ। यहाँ हुम्लाको पनि १९६२ मा जव विपी कोईराला र चीनियाँहरुको विचमा सगरमाथाको विषयलाई लिएर विवाद समाधान भईसकेपछि मुस्ताङमा पनि आएर हामी नेपालीहरुलाई मारेका थिए। उनीहरुले क्षमा मागे भन्ने छ। त्यसपपछि हाम्रो केहि पनि छैन (सिमा विवाद) भन्ने कुराहरु आएका हुन । म यही ठाउँमा जन्मेको, यही ठाउँमा हुर्केको र यो चीन भनेको विशेष गरेर हिजोको तिब्बत खास गरेर हाम्रो छिमेकी मुलुक। चरन–मरण हाम्रो दोहोरै हुन्छ। पहिला कस्तो चलन थियो भने, वर्षामा उनीहरुको चरन चै हाम्रोमा आउने, हिउँदमा हाम्रो उता जाने चलन थियो । त्यो वेलासम्म नीतिगत ढंगले पनि अर्कोले पनि यो सिमा मिचिएको छ भन्ने थिएन । तर, हिल्सामा चै त्यो वेला कृषि मन्त्रालयले करिव–करिव २०/२५ हेक्टर हाम्रो जमिन चै मिचिएको छ भनेर प्रतिवेदन दिएका थिए । त्यसलाई सरकारले होईन भनेर कता–कता त्यसलाई डिलिट गरे । यो इस्यु सुरु भएको कहिले होे भने २०७३ मा। यही लिमी लाप्चामा, जुन लोलुङजोङको कुराहरु छ। गर्पुदोचासम्म हामी विना रोकटोक जान पाउने, आउन पाउने थियो । जुन मैले हजुरहरुलाई देखाएँ, पानी ढलो। पारिपटी उनीहरुको आर्मी क्याम्प (चीनियाँ सेना), वारिपटी उनीहरुले नै देखाईदिए, यहाँवाट वाटो खनेर लैजाउ भनेर। तिमीहरुको भुमी हो भनेर। त्यती वेला हाम्रो जिपिएस–सिपिएस यस्ता कुराहरु पनि केही थिएनन्। पछि एउटा टोली गएको रहेछ, त्यो वेला एउटा मात्रै घर थियो (अहिले अतिक्रमित भनिएको क्षेत्र)। त्यो घरलाई चै चिनीयाँ पक्षले के भन्यो भने– यो क्वारेन्टाईन हो, तिमीहरुको पनि पशुवस्तु हुन्छ। हाम्रो पनि हुन्छ। अलि गरिब मुलुक भएपछि त ठिकै छ त, राम्रै गरेछ भन्ने भयो। अहिले अस्ति आईसकेपछि ०७७(सेक्टेम्वर–नोभेम्वर) मा ११ वटा विल्डिङ त उनीहरुले एकैछिनमा वनाई हाले। वनाई सकेपछि सवैभन्दा पहिला नाम्खा गाउँपालिकाको अध्यक्ष विष्णु बहादुर तामाङ र यहाँको सहायक सिडिओ दत्तराज हमालहरु यिनीहरु गए। यिनीहरुले नै भने– हाम्रो भुमी मिचियो। सहायक सर तपाई कहाँ हेर्नु भएको छ सरकारको भनेर यिनै (गाउँपालिका अध्यक्ष) ले भने। यहाँ के चलन छ भने उत्तरतिर जहाँ वोर्डर जोडिएको छ। त्यहाँका नेपालीलाई अलिअलि चामल दिने, लत्ताकपडा दिने गरिराखेका छन। अनि सहायक सिडिओ फर्केर आए। हाम्रो त माथि भुमि मिचिएछ, यिनै जनप्रतिनिधिहरुले पनि भने। जो आज मैले नाम भनिरहनु पर्ने छैन। आज चै एक इन्चि मिचिएको छैन, गलत कुरा हो। पोलिटिसाईज गर्यो भनेर चै भनियो। पोलिटिसाईज गर्नुको कुनै अर्थ छैन। कुनै भारत र चीन त्यहाँ जोडिएको सिमाना भईदिएको भए, अमेरिकासँग जोडिएको भै दिएको भए, केहि स्वार्थ जोडिएको छ की भन्ने हुन्छ। जती यिनीहरु नराम्रो भएपनि हामीलाई चाहिने छिमेकी त यिनै हुन । मलाई त भारत चाहिँदैननी हजुर, यही चीननै चाहिन्छ। जति राम्रो भएपनि नराम्रो भएपनि। त्यो भनेर आईसकेपछि दत्तराज हमालले रिपोर्ट वुझाए । उनले रिपोर्ट वुझाउने वित्तिकै उनलाई स्पष्टिकरण सोधियो। त्यसपछि तिनीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट हुलाक कार्यालय दार्चुला सुरुवा गरियो । पछि रोईकराई गरेर जुम्लामा आए, त्यस्तो भयो । यीनै जनप्रतिनिधि जो आज होईन भनेर कुर्लेर हिडेका छन्, उनैले भनेका। यो हो, हिजो हाम्रो यस्तो हो, चरिचरण यहाँ हो। त्यो भइसकेपछि यस्तो आयो, अनि के हो भनेर प्रश्न गरे?
त्यसपछि त्यो वेलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सेना, सशस्त्र, जनपथ वहाँहरु सवै जानुभो (सिमा निरिक्षण गर्न)। गइसकेपछि वहाँहरु हेरर आउनु भयो। वहाँहरु नफिर्किदै परराष्ट्र मन्त्रीले हुम्लामा एक इन्चि पनि जमिन मिचिएको छैन, भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो। त्यसपछि सिडिओ आउनु भयो। त्यसपछि के के देख्नु भयो, देखेको कुरा त भन्दिनु पर्यो नी भन्यौं। हामीले सिडिओलाई भन्यौ, त्यहाको वास्तविक स्थिती के हो त ? गाउँपालिकालाई भन्नु पर्यो, जनप्रतिनिधिलाई भन्नु पर्यो। भन्दाखेरी वहाँले हुन्छ म भोली मिटिङ्ग वोलाउँछु भन्नु भयो । चिरन्जिवी गिरी (तत्कालिन सिडिओ) भन्ने अहिले चै कारागारमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको हाकिम। त्यो भनेपछि अर्को दिन के भन्नु भयो भने– सरकारले यो कुरा वाहिर नल्याउनु भन्या छ। भनिसकेपछि त हामीलाई झन शंका लाग्ने कुरा भयो । एकातिर त्यो टिम नफर्किदै सरकारले एक इन्च पनि मिचिएको छैन भन्छ, अर्कोतिर तैले किन गरिस भनेर एउटा कर्मचारीलाई सजाय दिईन्छ। झन्नै जागिर खाएको ।
अर्कोतर्फ त्यहाँ एउटा यस्तो हल्ला फैलाइयो, हराएको ११ नम्वर पिलर भेटियो भनेर। न त्यो ११ नम्वर पिलर कहिलै हराएको थियो । टाकुल्ले भन्ने छ, हिल्सावाट पारिपटी देखिन्छ। ५२ सय मिटर माथि छ। त्यो होईन (११ नम्वर पिलर हराएको होईन) भनेर हामीले भन्या हो, तर भेटियो भनेर प्रोपोगाण्डा गरे।
ल त्यसो हो भने हामी जानुपर्छ भनेर म गए । न्यालु हँदै तुङलिङ भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ वसिन्छ। त्यसपछि माथि गएर दुईटा गाउँछ। वाउँ लाप्चा र दाइने लाप्चा। वाउँ लाप्चावाट हाम्रो भुमिवाट मानसरोवर स्पष्ट देखिन्छ। वादल लागेन भने कैलाश पनि प्रष्ट देखिन्छ, वादल लाग्यो भने कैलाश देखिदैन, मानसरोवर चै देखिन्छ। दाईने लाप्चा भन्छ (भन्ने ठाउँ छ), जहाँनेर १२ नम्वर पिलर छ, त्यो हेर्न जाँदाखेरी ठ्याक्कै फुटाएको, नयाँ वनाएको । लिपी पनि फरक भएको। लिपीमा पनि नापीले यस्तो खालको लिपी हुन्छ भनेर लेखेको हुन्छ। अनि त्यो टुक्र्याएका टुक्रा पनि त्यही छन् । अनि स्थानीयलाई भन्दाखेरी यो पिलर यही नै हो, यहि ठाउमा थियो। चेन्ज भएको छैन। नयाँ वनायो, किन वनायो ? भन्ने सुनियो। त्यो त नेपाल र चिनको दुवैको वोर्डर हो। प्रचलन के छ भने एउटा पिलर भारतले मर्मत गर्दा अर्कोलाई नेपालले गर्ने चलन छ। हामीले मर्मत गर्दा पनि अगाडि आएर भारतले उभिएर हेर्ने। चिनमा पनि त्यस्तै हो। तर, दुईटै देशको जुन संयुक्त पिलर छ। त्यसलाई मर्मत सम्भार गर्दाखेरी दुवै देशको प्रतिनिधि नभईकन त्यसलाई वनाउन पाईदैन।
आफु अगाडिको पानीको कपलाई घुमाउँदै– अव यो पिलर राख्यो, यसलाई अलिकति घुमाउने वित्तिकै त जमिन त कता हान्छ, हान्छ। नेपालीमा एउटा उखान पनि छ– अमिन विग्रियो त जमिन विग्रियो । अनि हामीले के भन्यौ भने–यो नयाँ कसरी वन्यो त। नेपालको सहभागिता थियो की थिएन भन्दा खेरी सहभागिता देखिदैन। त्यो किन वनाईयो । हिजोको कोअर्डिनेटले गर्दाखेरी, नापी नक्साको कुराले गर्दाखेरी उनीहरुकोमा होला। तर, मेरो दुईटा तर्क के हो भने– यो पौराणिक कालमा हाम्रै पशु चौपाया चराउने र पाल हालेर वस्ने ठाउँ हो। ०६६ सालमा वहाँहरुले नै तिमिहरुको वाटो यहाँवाट खन भनेर मैले आफैले दुई/अढाई किलोमिटर खनेको । अव मैले वनाएको कुरा मैले वनाएको होईन भनेर कसरी भन्न सक्छु । त्यसपछि हामीले सरकारलाई भन्यौ–नक्साको हिसाव के हो, एउटा विज्ञ टोली पठाईदिनोस।
आफनो कुरालाई थप पुष्टि गर्न उनले वेलिविस्तार लगाउँदै गए । प्रत्येक दश–दश वर्षमा दुईटै देशका टिमहरुले यसलाई रिभाईज गर्ने चलन रछ। तर, २०६३ वाट ०७८ सम्म भएको छैन। त्यो टोली पनि पठाउनु र विज्ञ टोली पनि पठाउनु पर्यो भनेर हामीले सरकारलाई भन्यौ। नक्सा ल्याएर जिल्ला प्रशासनमा राखिदेउ, गाउँपालिकामा राखिदेउ पनि भने। तर, काठमाण्डौंले केहि भएको छैन, वकम्फुसे कुरा हो भन्यो। यति हुँदा ११ दिन वित्यो। अव ११ नम्वर पिलर पनि हराएको भन्छन् । म त्यहाँ पनि गए। तर, हराएको किन हुन्थ्यो, भेटियो। मेरो स्वकिय सचिव र गाउँपालिका अध्यक्षलाई राखेर फोटो खिच्यौ। नेपालपटी पनि र चीन पटि पनि १९६२ मा स्थापित भएको स्पष्ट थियो। चिनीयाँ राजदुतावासले हामीले स्थापनाकालदेखी पिलर चलाएकै छैन भन्यो। तर, एउटाको कलर स्वाट्टै राम्रो हुने कसरी हुन्छ ? हिउँदमा के हुन्छ भने पिलरको सिमेण्ट हिउँले खान्छ।
त्यसपछि हामी १० नम्वर र ९(२) को पिलर हेर्न गयौ, जुन गेट छ। त्यो गेट हाम्रो सिमाना हो। यतापटी नेपालले ३० मिटर टाढा गेट वनायो। तर, उनीहरुले (चिनले) पिलरमाथिनै वार लगाएर गेट वनाए। अन्तराष्ट्रिय मापदण्डले पनि यो गर्न पाईदैन। त्यसैले यो पनि मिचेकै हो। उनीहरुको फोहोर फाल्ने पानी पनि यतापटि ल्याउँथे।
त्यसपछि यतापटी आईसकेपछि हिल्साको वजार छ। त्यहाँ सवैभन्दा पहिलो ९(१) भयो। पारीपटी ९(२), त्यसपछि ८(१) र त्यसपछि ७(१) छ। उनीहरुको पटीको ७(२) को पिलर चै देखिदैन। कता गयो कता गयो। अनि पुल छ। नर्मली के हो भने नदीको विच चै सिमाना हो। तर, जिपिएरले म्यापमा के देखाउँछ भने उनीहरुले वनाएको भवनको छेउछेउवाट पनि हाम्रो भुमि देखाउँछ। अनि ७ नम्वरभन्दा उता गएपछि जिपीएसले क्रस गरेर यतापटि आउँछ। फेरी पारीपटि गएर उनीहरुले वनाएको ब्ल्याकटप गरेको रोडभन्दा तलतिरको भुमी पनि नेपालतिर पर्छ र जुन झोलुङ्गे पुल छ त्यो पुल पुरै यतापटी (नेपालतर्फ) पर्छ ।
त्यसपछि ७(१) पुग्यौ। ७(२) उतापटी हो त्यो देखिदैन। त्यसपछि ६(१)। त्यो टोटल नेपालको । त्यसो भएपछि फेन्सिङ गर्ने त आफु तर्फवाट गर्नुपर्यो नी। तर, पिलरलाई आफुभित्र पारेर फेन्सिङ गरेको छ। अनि ६(२) चै नदिभन्दा पारिपटी छ। जमिन भत्केर पिलर झुण्डेको छ। तर, त्यसको संरक्षण गरिएको छैन। त्यसमाथि ५(१) छ। त्यो सिङ्गो नेपालको हो। त्यसलाई केही गरेको छैन। त्यसपपछि ५(२)। उनीहरुले त्यसलाई पनि आफुतिर राखे। अस्ति भरखरै यिनीहरुले त्यहाँ वाटो वनाए। हाम्रो भुमीमा मान्छे हिड्ने वाटो किन वनाएको हो ? अर्को दिन जाँदाखेरी त पानी छोडिदिएछ। अनि मलाई के याद आयो भने–कालापानीको। कालि भनेको इण्डियनहरुले अर्को खोला वनाएजस्तै। हिजो अस्तिवाट यहाँ हलचल (मान्छेको आवतजावत वढेपछि) भईरहेको छ। हिजो मात्रै त्यहाँको प्रहरीले भन्यो– त्यसलाइ खोलो फर्काईदिएर हत्तनपत्त पुरपार गरेको छ अरे । अनि कसरी भन्छ मेरो सरकारले १ इन्च पनि मिचिएको छैन ?
त्यो पनि माओवादीका सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले भनेको । मैले पनि ल आउनुहोस, तपाई त विहे पनि नगरेको मान्छे। खर्च पनि कम लाग्छ भने। तपाई आएर वोर्डरमा हर्नुहोस भने। यतापटिको लागि नक्सा छ। उतापाटीका लागि सिङ्गो वार नै लगाएको छ सन्तुष्ट भएर जानोस भनेको छु।
चीनको हरेक पोईन्टमा उनीहरुको चेकपोष्ट छ। हाम्रोलाई मतलवै छैन। वल्लवल्ल अहिले हिल्सामा वस्न थालेको (प्रहरी) हो। त्यै पनि मैले अस्ति त्यो वाटो वनाईदिएर अलि सजिलोसँग हिडिरहेका छन् । त्यो खालको अहिलेको अवस्था हो ।
सिमा मिचिएका विषयमा केही अघिसम्म लिमीका मान्छे पनि कसिए। तर, पछि उनीहरुलाई धम्कि दिईएछ। ‘६ महिनासम्म त तिमिहरु वन्द हो नी ? अनि खाना कस्ले दिन्छ, चाईनाले दिदैन ? चुप’ भनेपछि सवै चुप लागे। पहिला–पहिला लिमीयालीले भन्थे– ‘नुन चाईनाको, उन चाईनाको, सुन चाईनाको। अनि कानुन मात्रै तेरो मान्नु पर्ने भन्थे।’ लिमीको यो स्थिती छ। त्यसैले उनीहरु डराएका छन्, कतै चाईनाले खुराक पनि वन्द नगरोस। अव अहिले त यहि जिल्लाका अन्य ब्यक्ति पनि होईन (सीमा मिचिएको) भन्न थाले । प्रमाण छ, देखेको छु। पहिलाकोले वोलेन, अहिलेको सिडिओ वल्ल ‘यो त हजुर हामीलाई त हेपेकै रछ त, यहाँ त वर्वाद गरेछन्’ भन्न थालेका छन् । कोही वोल्न चाहँदैन। मेरै नेता शेरवहादुर देउवाले चिनीयाँ राजदुतसँग दुई घण्टा भेटिसकेपछि ‘के हो, एकदम फायर छ नी ? के गर्या’ भनेर हप्काउनु पनि भयो।
मैले भनिदिएँ– मैले जे गरेको छु, सत्य छ। यदि मैले नचाहिने गरेको रछु भने, दुई देशको सम्वन्ध विगार्न खोजेको, म कसैको लहलहैमा लागेको रछ भने मत राष्ट्रघाती भएँ नी। होईन भने मैले अरु गर्न सक्ने त केहि छैन। भएका पदवाट राजिनामा दिन्छु। किनभने म नालायक भएँ। होईन भने मुलुकका लागि उत्तर होस दक्षिण होस । जोसुकै होस १ इन्च पनि सिमिा मिच्न पाईन्न। घरको साँधमा त अलिकति जनिमनका लागि झगडा पर्छ। दुईटा देशको भुमि हो नी त भन्ने कुरा मेरो हो। म जिल्ला विकास समितिको सभापति भईसकेको मान्छे, संविधान सभामा वसेर सहि गरेको मान्छे। एक पटक मन्त्री भईसकेको मान्छे। त्यसपछि प्रदेशको पहिला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भईसकेको मान्छे। अलिकती होस त हालानी त मसँग। त्यसैले यसलाई इस्यु वनाउने कुरा होईन।
अस्ति गएपछि ‘मैले भनेको कुरामा तपाईले किन नजाने, समिति पठाईदिनोस। सत्यतथ्य छुट्याउन समिति पठाई दिनोस भने। ’ समिति त आएको छ। ७ जनाको टोली गएको छ निरिक्षणमा ।
अर्को कुरा, चाईना वोर्डरभन्दा २०–३० किलोमिटर वरैवाट चाईनाको टाईम देखाउन सुरु गर्छ । त्यहाँको समय नेपालभन्दा दुई घण्टा अगाडि छ। ५ वजेको अलार्म लगाउनु भयो भने– रिङ्ग वज्छ। तर, नेपालको टाईम ३ वजेको हुन्छ।
नेपाली काँग्रेसका नेता तथा हुम्लाबाट कर्णाली प्रदेशसभामा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीसँग नेपाल आजका लागि प्रस्तोता तथा राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले गरेको कुराकानी हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस।
हुम्लावासी भन्छन्–चीनियाँ हेपाहा प्रवृत्ति अती भयो, अजिङ्गरले भूमी निल्यो
चीनले अतिक्रमण गरेको ३६ हेक्टर जग्गा खोज्न सरकारले गठन गर्यो अध्ययन समिति
कांग्रेसको सिमा विवादको मौसमी रुघाखोकी, सरकारमा गएपछि विशेक !